Ny doka voalohany momba ny iPhone X dia naminavina ny handondoman'ny mpiasa ny varavarankely Apple Park | Avy amin'ny mac aho
Nanomboka ny volana desambra lasa teo, rehefa nanomboka nifindra tany amin'ireo fotodrafitrasa vaovao ao amin'ny Apple Park ireo mpiasan'ny Cupertino, dia nihena tsikelikely ny olan'ny mpiasa sasany tamin'ny rindrina fitaratra izay manodidina ny fotodrafitrasa rehetra izy ireo.
Betsaka ireo mpiasa nifandona tamina rindrina tsy nahy, noho ny tsy fisian'ny famantarana, olana iray izay ezahan'i Apple hamahana amin'ny alàlan'ny fanampiana andiana stiker vaovao, araka ny efa nampahafantarinay anao, andro vitsivitsy lasa izay ary izy ireo ankehitriny nampihena ny isan'ny fitsidihana ny infirmary Apple Park. Fa raha mijery ny fanambarana voalohany an'ny iPhone X ianao, Toa fantatr'i Apple izay hitranga.
Mpampiasa Reddit no nahatsikaritra fa tamin'ny fanambarana voalohany momba ny iPhone X, ireo bandy avy ao Cupertino dia nanantena ny iray amin'ireo olana amin'ny famolavolana izay ananan'ny Apple Park. Amin'izao fotoana itenenan'i Apple ny karazana vera ampiasaina ao amin'ny iPhone X dia hitantsika ny fomba fifandohan'ny olona amin'ny rindrina fitaratra, mampiseho ny toe-javatra niainany izay nijaly tamin'ny mpiasa Apple.
Nandritra ny fizahana teo aloha natao ny trano dia nanamafy ilay inspektera Albert Salvador fa tsy nijery ireo takelaka fitaratra mihitsy izy ireo, ary nilaza fa tsy hitan'izy ireo ho olana amin'ny fahamendrehan'ireo mpampiasa ireo toerana ireo. Rehefa nanjary fantatry ny besinimaro ireo zava-niseho dia noterena i Albert "hanoro hevitra" ny fampiasana sticker fa hahafahany manavaka ny rindrin'ny fitaratra ary hisorohana ny tranga hafa. Rehefa nanontaniana momba an'io i Apple, dia nitazona foana ilay lohahevitra, milaza fa nisy tranga iray momba an'io nefa nanomboka teo dia tsy naverina intsony izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » iPhone » Ny doka voalohany momba ny iPhone X dia naminavina ny fandomanan'ny mpiasa ny varavarankely Apple Park